Tahriibka: aragti qeexaysa sababaha keena iyo qaabka loo daawayn karo tahriibka da'yartu waa aafo qaran .musiibo ummadeed iyo mushkilad caalami illahy ayaa mahad dhamanteed iska leh. Naxariis iyo nabad galyana ha ahaato nabigeena du shiisa, waxaad aad ka tagaysaa tii aad u dhalatoo, waxa aad tagaysaa tukaloon lagaa rabin, waxa aad ka tagaysaa tii aad lahaydoo, waga aad tagaysaa tukaloo rag leeyahay, ninka tiisii soo qubay yurub kuma tisqaadoo, qof ka tagay dalkiisii tukalana wax ka mataro, meel aan lagaa tabin meel aan laguu tudhin, tolmiyo wall jirincidi kaa tix galinayn, waa erayadii: abwaan. Axmed c/laahi maxamud (axmed fartaag), beryahan danbe waxa si wayn u soo shaac baxay erayga “tahriib”oo ka turjumaya hayaanka is miidaaminta ku dhisan ee kalahaad, boqool, caraabe. Guurayn iyo guulidba loogu jiro sidii loo beegsan lahaa in rar ka lagu furo deegaanada barwaaqada ah (waa sida ay socotadaasi aaminsan yihiine), hadaba waa maxay tahriibku ama tahriibintu tahriibintu:waa in alaab la qarinayo lagu geliyo meel aan si sharci ah loo gelin karin, sida tahriibinta/koontarabaaninta maandooriyayaasha,hubka iwm.
Tahriibku waa dhibaato soo jireen ah oo heerar kala duwan soo meray, qaabab kala duwana lahaan jiray.
Tahriibka dadku ama tahriibintoodu wax uu ka mid yahay falal denbiyeedyada qawaaninta caalamku la dagaalanto lana mid ah falal denbiyeedyada tahriibinta maandooriyaaasha iyo hubka.
Sababaha ugu badan ee tahriibka keena waa dhaqaale iyo nolol raadin, waxa ku soo xiga kuwa dhinaca.
Nabadgelyada iyo amniga la xidhiidha, waxa kale oo dhici karta in loo tahriibo caafimaad raadin, cilmi raadin amaba in la soo guto waajib diini ah iwm.
Tahriibka da’yarta soomaaliyeed: inkastoo mushkilada tahriibku ay tahay dhibaato soo jireen ah, si wayna u soo shaac-baxday bilawgii sideetanadkii qarnigii hore, oo taliskii hantiwadaaga ahaa uu culays dhinaca xoriyada ah oo balaadhan saareyguud ahaan bulshada soomaliyeed gaar ahaan, deegaanka somaliland oo ay k bilowdeen dhaqdhaqaaqii snm ee ay ku doonayeen inay xukunka kaga tuuraan xukuumadii kaligeed taliska ahayd ee uu hormuudka ka ahaa …maxamed siyaad barre, hadana waxay sanadahan danbe gaadhay heer halis ah oo ay aqoonyahankii iyo da’yarii ubaxa dalka ahayd si wadar ah uga baxayaan dalka.
Dhaqaale korodhsi: waxa laga yaabaa in la arko, qoysas dhaqaale ahaan fiican, dhibaato kale oo muuqataana aanay haysan, hadana ubadkoodii u diraya yurub iyagoo jid dheer oo dhib badan u badheedhaya kuna bixinaya kumanaan doolar. Tahriibka noocan ahi maaha mid baahi dhaqaale keentay ee waa mid ku salaysan ka kordhi iyo arimo kale oo la mid ah.
Magac Raadin: waxa iyana dhici karta in loo tahriibo in laga helo magac iyo maamuus, waayo bulshadu waxa ay tixgelin dheeraad ah siisaa qof kasta oo ka soo laabta ama ku nool wadamada reer galbeedka, iyadoon qofnimadiisa iyo dadnimadiisa midna fiiro gaar ah siinin.
Sharci Raadin: dadka qaarkooda waxa ay u tahriibaan inay wadama galbeedka passport ka qaataan, waxa qiima dhac wayni ku yimi shakhsiyadda qofka soomaaliga ah ee sita baasboorka dalkiisa, kaasoo aanay u suurogal ahayn inuu meelo badan oo aduunka ah ku booqdo. Arintani waxa ay caqabad ku tahay ganacsigii, waxbarashadii, caafimaadkii iyo wax kasta oo u baahan in socdaal iyo safar debedeed loo galo, sidaa awgeed ayey dadka in badan oo ka mid ahi ku andacoodaan inay u baahan yihiin sharci ay ku socsocdaan, ka dibna dariiqaa halista ah u maraan.
Caafimaad Raadin: waxa iyana dhacda in qof la tahriibiyo amaba uu tahriibo si uu awood ugu yeesho inuu helo daryeel caafimaad oo tayo leh.
Midaynta ehelladda: waxa tahriibka sabab u noqon kara dad ehel ah oo is raadsanaya sida wiil doonaya inuu waalidkii oo yurub uga horeeya u tago amaba lamaane is raadsanaya waxa lagu magacaabo (family union).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aafda_tahriibka&oldid=221908"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:04.